Izindaba - uLonghua ubambe iqhaza embukisweni we-18 weChina Polyurethane
NgoJulayi 28-30th i-18th China International Exhibition on Polyurethane (PU China 2021 / UTECH Asia) e-National Exhibition and Convention Center (Shanghai), ifike esiphethweni esiyimpumelelo.
I-PU China / UTECH Asia inikeza ochwepheshe bezinto ze-polyurethane ithuba elihle lokubona intuthuko yakamuva emhlabeni jikelele kubuchwepheshe be-polyurethane kufaka phakathi yonke imikhiqizo yakamuva, ukwakheka, imishini nemishini. Umcimbi ususelwa ebangeni elibanzi lochwepheshe be-polyurethane abamele izimboni eziningi ezisungula nge-polyurethane.
I-SHANDONG LONGHUA NEW MATERIAL CO., LTD elungiselelwe ngokucophelela, ngezinga elihle kakhulu lobuchwepheshe, ukusebenza okuphezulu; uchungechunge lwe-polyether polyol ne-polymer polyol brand imikhiqizo iphinde ibe yinto evelele embonini efanayo. Ubungcweti obunobuhlakani kanye nokunemba kwenkomba yalokho okubhaliwe, kuhehe osomabhizinisi abaningi basekhaya nabangaphandle bahlangana ukuzobuka nokubonisana ukuze kuxoxwe. Abathengi abaningi balethe izinkinga zobuchwepheshe abahlangabezane nazo ekuqhubekeni kwesigcawu, ngemuva konjiniyela abasezingeni eliphakeme, ukuqondiswa kwezobuchwepheshe kanye nokwenza kahle inqubo, inani lokwaneliseka okukhulu kwamakhasimende, isayithi lifinyelele inhloso yokuthenga.
Uhambo lokuvuna. Ngombukiso, amashumi ezinkampani nabantu bagcina ukuxhumana noLONGHUA, futhi sibuye nezeluleko eziningi ezivela kubasebenzisi bokugcina nabathengisi ezibaluleke kakhulu.
SHANDONG LONGHUA NEW MATERIAL CO., LTD embonini yePolyurethane eminyakeni yamuva yenze intuthuko nempumelelo yesikhathi eside; kukhona ifa elithile lomkhiqizo, ukuthuthukiswa komsindo. Nekhono elihle lokumaketha ikhono, esinalo emkhakheni wemikhiqizo yokulungiswa kwempahla eluhlaza okuqinile lisesikhundleni esibalulekile. Noma kunjalo, kodwa futhi siyazi ukuthi "kusekude phambili. Sizophinda siqhubeke nokwenza ngcono uhlelo lokuphatha, ukusheshisa inqubo yokufaka uphawu lwe-LONGHUA, ubuso obunengqondo ngokufunwa kwezimakethe, okwenza insizakalo esezingeni eliphakeme kumakhasimende nabangane.
Asihlangane embukisweni we-19 weChina Polyurethane ngonyaka ozayo!
Isikhathi Iposi: Aug-23-2021